Mashoko Akanaka Akanyorwa naRuka 20:1-47
Jesu anobvunzwa kuti akapiwa naani mvumo yezvaanoita (1-8)
Mufananidzo wevarimi vakaponda vanhu vaitumwa (9-19)
Mwari naKesari (20-26)
Mubvunzo pamusoro perumuko (27-40)
Kristu mwanakomana waDhavhidhi here? (41-44)
Kunyeverwa nezvevanyori (45-47)
20 Mumwe musi achidzidzisa vanhu mutemberi uye achizivisa mashoko akanaka, vatungamiriri vevapristi nevanyori nevakuru vakasvika 2 vakati kwaari: “Tiudze tinzwe, une mvumo here yekuita zvinhu izvi? Kana kuti ndiani akakupa mvumo yacho?”+ 3 Akavapindura kuti: “Ndichakubvunzaiwo mubvunzo, mondipindura: 4 Rubhabhatidzo rwaiitwa naJohani rwakabva kudenga here kana kuti kuvanhu?” 5 Vakatanga kutaurirana vachiti: “Kana tikati, ‘Rwakabva kudenga,’ achati, ‘Nei musina kumutenda?’ 6 Asi kana tikati, ‘Rwakabva kuvanhu,’ vanhu vese vachatitema nematombo, nekuti vane chokwadi kuti Johani aiva muprofita.”+ 7 Saka vakapindura kuti vakanga vasingazivi kwarwakabva. 8 Jesu akati kwavari: “Neniwo handikuudzii kuti ndiani akandipa mvumo yekuita zvinhu izvi.” 9 Akabva atanga kuudza vanhu mufananidzo uyu: “Mumwe murume akadyara munda wemizambiringa,+ akausiya mumaoko mevarimi, akaenda kunze kwenyika kwenguva refu.+ 10 Mwaka wekukohwa pawakasvika, akatuma muranda kuvarimi vacho, kuti vamupe michero yemunda wacho wemizambiringa. Asi varimi vacho vakamuendesa asina chinhu, pashure pekumurova.+ 11 Akatumirazve mumwe muranda. Naiyewo vakamurova, vakamunyadzisa, vakamuendesa asina chinhu. 12 Asi akatumirazve wechitatu; uyuwo vakamukuvadza, vakamukanda kunze. 13 Muridzi wemunda wemizambiringa akabva ati, ‘Ndoita seiko? Regai nditumire mwanakomana wangu wandinoda.+ Pamwe uyu vachamuremekedza.’ 14 Varimi vacho pavakamuona vakataurirana vachiti, ‘Uyu ndiye mugari wenhaka. Ngatimuurayei, kuti nhaka yacho ive yedu.’ 15 Saka vakamukanda kunze kwemunda wemizambiringa, vakamuuraya.+ Saka muridzi wemunda wemizambiringa achavaita sei? 16 Achauya ouraya varimi ava, opa vamwe munda wacho wemizambiringa.” Pavakanzwa izvi vakati: “Zvinhu zvakadaro hazvifaniri kutomboitika!” 17 Asi iye akanyatsovatarisa akati: “Saka izvi zvakanyorwa zvinorevei: ‘Dombo rakarambwa nevavaki, ndiro razova dombo guru repakona’?*+ 18 Munhu wese anowira padombo iroro achaparara.+ Kana ari munhu achawirwa naro, richamukuya.” 19 Vanyori nevatungamiriri vevapristi vaida kumubata pakare ipapo, asi vaitya vanhu, nekuti vakazoziva kuti aitaura mufananidzo uyu achifunga nezvavo.+ 20 Uye pashure pekuongorora zvese zvaaiita, vakatuma varume vavakanga vabhadhara pachivande, kuti vanyepedzere kuva vanhu vakarurama, vachida kumuwanira mhosva pamashoko ake+ vobva vamuisa mumaoko ehurumende nemumaoko agavhuna. 21 Vakamubvunza vachiti: “Mudzidzisi, tinoziva kuti munotaura uye munodzidzisa zvakarurama uye hamusaruri, asi munodzidzisa nzira yaMwari maererano nechokwadi: 22 Zvinobvumirwa nemutemo* here kubhadhara mutero* kuna Kesari kana kuti kwete?” 23 Asi iye akazviona kuti vaida kumunyengedza, ndokuti kwavari: 24 “Ndiratidzei dhinari.* Mufananidzo nemashoko akanyorwa pariri ndezvaani?” Ivo vakati: “NdezvaKesari.” 25 Iye akati kwavari: “Saka munofanira kudzorera zvinhu zvaKesari kuna Kesari,+ asi zvinhu zvaMwari kuna Mwari.”+ 26 Saka vakatadza kumuwanira mhosva pamashoko ake pamberi pevanhu, asi vakashamiswa nemhinduro yake zvekuti vakashaya chekutaura. 27 Asi vamwe vaSadhusi, avo vanoti hakuna rumuko,+ vakauya vakamubvunza kuti:+ 28 “Mudzidzisi, Mozisi akatinyorera kuti, ‘Kana murume akafa achisiya mudzimai, asi iye asina mwana, munin’ina wake anofanira kutora mudzimai wacho, oberekera mukoma wake vana.’+ 29 Saka kwaiva nevatevedzani vanomwe. Wekutanga akaroora, asi akafa asina mwana. 30 Saka wechipiri 31 newechitatu vakamuroorawo. Ndizvo zvavakaita vese vari vanomwe; vakafa vasina vana. 32 Mukadzi wacho akazofawo. 33 Saka parumuko, achange ari mudzimai weupi wavo sezvo vese vari vanomwe vakambomuroora?” 34 Jesu akati kwavari: “Vana vepanguva ino* vanoroora nekuroorwa, 35 asi vaya vakaonekwa vakakodzera kuwana upenyu hwepanguva iyoyo* uye kumutswa kuvakafa havaroori kana kuroorwa.+ 36 Tingatoti havazofizve, nekuti vanenge vakaita sengirozi, uye ivo vana vaMwari nekuti vanenge vari vana verumuko. 37 Asi zvekuti vakafa vanomutswa, kunyange naMozisi akazvizivisa munyaya yegwenzi reminzwa, paanoshevedza Jehovha* kuti ‘Mwari waAbrahamu naMwari waIsaka naMwari waJakobho.’+ 38 Iye haasi Mwari wevakafa, asi wevapenyu, nekuti kwaari vese vapenyu.”+ 39 Vamwe vanyori vakapindura kuti: “Mudzidzisi, mataura zvakanaka.” 40 Nekuti vakanga vasisina ushingi hwekumubvunza kunyange mubvunzo mumwe chete. 41 Iye akabva avabvunza kuti: “Sei vachiti Kristu mwanakomana waDhavhidhi?+ 42 Nekuti Dhavhidhi anoti mubhuku reMapisarema, ‘Jehovha* akati kunaShe wangu: “Gara kuruoko rwangu rwerudyi 43 kusvikira ndaita kuti vavengi vako vave sechitsiko chetsoka dzako.”’+ 44 Zvino kana Dhavhidhi achimuti Ishe, iye mwanakomana wake pakudii?” 45 Vanhu vese pavakanga vakateerera, akabva ati kuvadzidzi vake: 46 “Chenjererai vanyori vanofarira zvekufamba-famba vakapfeka nguo refu vachida kukwaziswa mumisika uye vanoda zvigaro zvepamberi* mumasinagogi nekugara panzvimbo dzevanoremekedzwa pakudya kwemanheru.+ 47 Vanoparadza dzimba dzechirikadzi uye vanoita minyengetero mirefu yekuda kuonekwa nevanhu. Ava vachawana mutongo wakaomarara kupfuura vamwe vese.”
^ Kana kuti “vemamiriro ezvinhu epanguva ino.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
^ Kana kuti “mumamiriro iwayo ezvinhu.”